channelnews – channelnews.us
Stories By channelnews
By channelnewsFebruary 27, 2018
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် G-Dragon ကတော့ စစ်မှုထမ်းတာဝန်တွေကို ဖေဖော်ဝါရီ (၂၇)ရက်နေ့မှာ စတင်ပြီး ထမ်းဆောင်ပါပြီ။ BIGBANG အဖွဲ့ထဲမှာဆိုရင် စစ်မှုထမ်းတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်တဲ့ ဒုတိယမြောက် အဖွဲ့ဝင်ပါ။ ဖေဖော်ဝါရီ...
Justin ကတော့ မတ်လ(၁)ရက်နေ့မှာ အသက်(၂၄)) နှစ်ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမွေးနေ့ပွဲကတော့ Selena နဲ့ပြန်လည်ပေါင်းဖက်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဖြတ်သန်းရတဲ့ မွေးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီနှစ်မွေးနေ့ကတော့ Justin အတွက် ပျော်စရာအကောင်းမွေးနေ့ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတာ...
အဆိုတော်ကြီး ဂရေဟမ်ရဲ့ ချစ်ရသော သမီးချောချောလေးဖြစ်တဲ့ ပန်းရောင်ခြယ်ကတော့ သူ့ရဲ့ မိဘတွေက သူငယ်ချင်းလိုပေါင်းသင်း လို့ရတာကြောင့် ဘယ်ကိစ္စမဆိုတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အချစ်ရေးအကြောင်းလည်းတိုင်ပင်ဖြစ်မှာဆိုတော့ ပန်းရောင်က ဘယ်လို ယောက်ျားလေးမျိုးကို စဉ်းစားဖြစ်မလဲဆိုတာ...
By channelnewsFebruary 23, 2018
ချိုဇင်ဝင်းပြည့် နဲ့ တပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် စိုင်းစိုင်ခမ်းလှိုင်ရဲ့ မင်းလေးက hot တယ်သီးချင်း နဲ့ အမိုက်စားကကွက်
By channelnewsFebruary 22, 2018
အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အကယ်ဒမီ ရဖို့ ဦးတည်ပြီး သရုပ်မဆောင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းတော့ လိုအပ်လာပြီ ထင်ပါတယ် လို့ သရုပ်ဆောင် ဖြိုးငွေစိုး က MC သို့ပြောပါတယ်။ “ တော်တေ်ာများများကတော့...
By channelnewsFebruary 20, 2018
မောင်မောင်တို့ မိသားစုလေး ဘယ်သူကူပါ့မယ် . . – – – – – – – – – ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်)...
By channelnewsFebruary 19, 2018
ချင်းအမျိုးသားနေ့အတွက် Telenor.နဲ့အတူ​ဟားခါးကိုလာပီကွယ် 19နဲ့20 ရက်နေ့လုးံလုးံ တူတူဆုံမယ်နော်, ချင်းအမျိုးသားနေ့Welcome to Chin State. အနွေးထည်များများ ယူသွားဦးနော် အရမ်းအေးမှာ ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အအေးက အသားထဲစိမ့်သွားအောင်ကိုအေးတာ
By channelnewsFebruary 13, 2018
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေ အများကြီးရှိတဲ့ အထဲကမှ အင်ဒိုနီးရှားမိသားစုတစ်စုကတော့ မိကျောင်းကိုမှ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် မွေးမြူထားပါတယ်။ မိကျောင်းပိုင်ရှင်ရဲ့ နာမည်ကတော့ Irwan ဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဂျာဗား၊ Borgor မြို့မှာ နေထိုင်ပါတယ်။...
By channelnewsFebruary 12, 2018
သင့်ဘဝကောင်းမွန်ချင်ရင် ———————————– ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုပဲ အချိန်တိုင်းသင်တွေးနေရင် သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေ ကောင်းမွန်လာမယ်… သင့်စိတ်ခံစားမှု ကောင်းမွန်လာရင် သင့်အပြောအဆိုတွေကောင်းမွန်လာမယ်… သင့်အပြောအဆို ကောင်းမွန်လာတာနဲ့အမျှ သင့်လုပ်ရပ်တွေ ကောင်းမွန်လာမယ်…. သင့်လုပ်ရပ် ကောင်းမွန်လာတာနဲ့အမျှ သင့်အကျင့်တွေ...
ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရပေမယ့် ထောက်ပံ့မယ့်သူမရှိပါဘူးလို့ပြောလာသည့် – လူရွှင်တော် ဦးစိန်ရိုး
အသက် (၁၈) နှစ်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲမှာ လူရွှင်တော်တစ်ယောက်အဖြစ် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဦးစိန်ရိုး က ကင်ဆာဝေဒနာကို ခံစားနေရပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ ဆေးရုံတတ်စဉ် အခါ က အနုပညာအသိုင်းအ၀ိုင်း ၊...